Isbadalka Sacuudiga: Markii ugu horeysay oo qof dumar ah loo magacaabo Safiir – Somali Top News
Isbadalka Sacuudiga: Markii ugu horeysay oo qof dumar ah loo magacaabo Safiir
Boqortooyada Saudi Arabia ayaa markii ugu horeysay xil danjire-nimo u magacaawday qof dumar ah oo noqoneysa danjiraha Boqortooyada ee dalka Mareykanka, sida lagu shaaciyay digreeto ka soo baxday boqortooyo.
Riima Bint Bandar ayaa noqoneysa danjiraha Sacudiga ee dalka Mareykanka waxaana muuqata in Sacuudigu arintan uga gon-leeyahay ugu yaraan in uu ku qaboojiyo carada ka dhalatay dilkii loo geystay Wariye Jamaal Khajoggi.
Waxaa ay xilal ka qabatay dhawr shirkadood oo kuwa ganacsiga ah oo ay ka mid tahay shirkadda Harvey Nichols oo ay madax ka noqotay qaybteeda Sucuudiga.
Amiiradda waxaa ay dad badani u arkaan in ay tahay qof xuquuqda haweenka uga doodda dal badanaa lagu dhaliilo heerka sinnaan la’aanta labka iyo dheddiga.
Markii ugu dambaysay waxaa ay ka shaqaynaysay wakaaladda maamulka ciyaaraha, waxa aanay xoogga saartay sidii loo kordhin lahaa ka qayb galka haweenka ee ciyaarah iyo jimicsiga.
← Al shabaab oo soo bandhigay khasaaraha duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha Mareykanka
Wasiirada maamul goboleedka Puntland oo amaro la dul dhigay →
Puntland oo dib ugu celisay Itoobiya 50 qof oo muhaajiriin ahaa
Muxuu salka ku hayaa khilaafka ka taagan gobalka Hiiraan ?
December 9, 2018 Somali Top News 0
Taliyaasha Nabad Sugida Hiiraan oo Xabsiga la dhigay